Global Voices teny Malagasy » Ivelan’i Venezoela: Rakipeo Mankany Amin’ny Lalina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 08 Septambra 2017 5:05 GMT 1	 · Mpanoratra Sahar Habib Ghazi, L. Finch Nandika avylavitra
Sokajy: Amerika Latina, Venezoela, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Global Voices Podcast
Venezoelà no manana ny tahirin-tsolika lehibe indrindra fantatra erantany . Taona maro tany aloha, izy no nanankarena indrindra tao Amerika Latina. Firenena iray mikororosy izy  ankehitriny, tsy ampy sakafo; vidim-piainana midangana be eto an-tany; areti-mifindran'ny vonoolona tsy mitsahatra mitombo; ary governemanta iray faran'izay tsy mamim-bahoaka manamafy ny fahefany amin'ny alàlan'ny lalàm-panorenana no sady mamoritra an-kerisetra ireo mpanohitra azy.
Tsy olana iray no misy ao Venezoelà. Manana olana marobe izy, mifamatopatotra izy rehetra ireny ary miantraika amin'ireo Venezoeliàna tsotra. Koa satria mihamafy ny fiainana ho an'ireo olona 31 tapitrisa miaina ao anatin'i Venezoelà, ao anatin'ity fizaràna iray amin'ny “Mankany amin'ny Lalina” ity dia niresaka taminà vehivavy Venezoeliàna roa izahay, izay monina ivelan'ny fireneny.
Laura Vidal  sy Marianne Díaz Hernández  dia samy mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina Global Voices. Vao haingana i Marianne no nandao ny fireneny, noho ny krizy; Laura kosa efa sivy taona lasa izay, 2008, no niàla tany, fony ilay fandaharanasa sosialin'i Venezoelà nampahafantarina ho toy ny lasitra ho an'i Amerika Latina.
Ity ny topimaso avy amin'ilay andiany :
Izay rehetra ataonao ao Venezoelà amin'izao fotoana dia toa misy fomba fifandraisany amin'ny fomba fitondra an'ilay firenena daholo. Ohatra, tsy manana ronono intsony ianao dia mila mifampiresaka amin'ny hafa momba ny zavamisy hoe tsy afaka manana ronono ianao satria mila mividy ronono amin'ny fatra betsaka, amin'ny andro voafaritra ao anatn'ny herinandro, noho ireo fanapahankevitra politika noraisina. Ny zavatra rehetra mitranga ao amin'ny firenena, ny mitranga ao anatiny momba izay resaka izay sy ny hoe ianao tsy maintsy mametraka ny tenanao any anatin'ny sehatra ara-politika any sy mandray ankolafy.
Misy foana ny fomba handavoana olona iray. Sakànana ny asanao any amin'ny ministera iray. Sakànana ianao tsy handeha. Sakànana ianao tsy hahazo vatsimpianarana. Sakanana ianao tsy hahazo miditra oniversitem-panjakana. Sakànana ianao tsy hanaraka ny governemanta. Misy foana antony iray tsy amelàna anao haneho ny fomba fijerinao na hanakànana anao tsy handray anjara. Ary tsy ireo olona manaraka ny governemanta ihany io. Efa lasa zavatra iainana amin'ny ankapobeny io. Ankehitriny amin'izao izaho efa aty ivelan'ny firenena izao, samy mampangina ahy ireo lafy roa ireo. Tena tsy manana zo haneho hevitra aho, na misy aza zavatra izay fantatro ankehitriny fa tsy ho takatro velively raha mbola tsy niala tao amin'ny firenena aho.
Ny Mankany Amin'ny Lalina dia rakipeo an'ny Global Voices andoaranay avy any anatin'ny lalina ny lohahevitra iray izay tsy mahazo loatra ny fandrakofana mendrika ho azy avy amin'ireo fampahalalam-baovao mahazatra. Nasongadinay ato anatin'ity fizaràna ity ireo mozika nampiasàna ny lisansa Creative Commons avy ao amin'ny Arsivan'ny Mozika Malalaka (maimaimpoana), isan'ireny ny Daemones  sy Scenery  an'i Kai Engel, Bathed in fine dust an'i Andy Cohen ; ary Mutinee an'i Podington Bear .
Ny sary nasongadina ato anatn'ity rakipeo ity antsoina hoe “Rehefa tsy maty ireo tanora Venezoeliàna dia manao inona” dia an'ilay Venezoeliàna mpanaingo an-tsary, Gonzalez . Fampiasàna nahazoana alàlana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/09/08/106905/
 manana ny tahirin-tsolika lehibe indrindra fantatra erantany: http://www.businessinsider.com/venezuela-importing-oil-despite-having-worlds-largest-oil-reserves-2017-5
 Firenena iray mikororosy izy: https://globalvoices.org/specialcoverage/what-is-happening-in-venezuela/
 Bathed in fine dust an'i Andy Cohen: http://freemusicarchive.org/music/Andy_G_Cohen/MUL__DIV_1198/Andy_G_Cohen_-_MULDIV_-_07_-_Bathed_in_Fine_Dust
 Mutinee an'i Podington Bear: http://freemusicarchive.org/music/Podington_Bear/Egress/10_Mutinee